Indlela amajelo angenza ngayo iindaba zobuxoki ngoncedo lwe-AI (ingqiqo yolwazi): uMartin Vrijland
Okokuqala, kufuneka sikhulume ngezinto zokwenza inkohliso ngoncedo lwabadlali. Ukwenza oku ngokunika abantu obaqeshweyo kwaye unyanisekile kwiminyaka edlulileyo ibhonasi enhle okanye, umzekelo, ukunciphisa izivakalisi okanye i-ID entsha (kwindawo ethile kude) kwaye uyisebenzise ukubeka iindaba kwimeko. Ngokomzekelo, umfundi weli sayithi uthathe kakuhle indlela iPowNed eyenze ngayo Poelenburgse vloggersrel (ngokupheleleyo kwindawo) kwaye mna ndabhalela indlela umboniso obandakanya ukungqubana phakathi kwePegida kunye no-Antifa ngokupheleleyo kwindawo iikhamera zeendaba eziqhelekileyo. Kwakhona ukulahleka nokubulawa Anne Faber wayenayo yonke into esuka kwi-PsyOp (ukusebenza kwengqondo). Kwaye ngoko sinokwenza uluhlu lukhulu. Ngamanye amaxesha akufuneki namagama ukubonisa indlela owenza ngayo iindaba eziyinyaniso kunye nemifanekiso ngokwayo. (funda ngaphezulu ngaphantsi kwevidiyo)
Nangona kunjalo asifanele siqale sicinge ukuba siphumelele imfazwe kwaye ngoku siyakwazi ukubona ngeendaba. Siphelile kwiminyaka yobuchule beengcali (AI) kwaye oko unokukwenza izinto ezinokusetyenziswa kakade kwi-1 kwimeko ekhankanywe ngasentla. Ingqiqo yobuchule yenza okuninzi Imayini yedathaukuba uyakwazi ukwenza, umzekelo, ukubikezela indlela ojonga ngayo kwi-30 iminyaka. Kungenxa yokuba i-AI ihamba kwaye ihlalutye yonke idatha esuka kuzo zonke iikhamera kunye ne-microphone kunye nezithombe zoononophelo zoluntu ezifana nomnetho omkhulu. Udinga amandla amaninzi kuloo khompyutha kwaye loo khompyutha ithola i-AI ngesiseko somgaqo-blockchain (apho i-bitcoin idlala indima ebalulekileyo). I-AI ke ingqondo ekhulayo eyongeza enye yamakhompyutha kwi-neocortex yayo imihla ngemihla. Abantu abafana nabo Palantir kwaye zonke iintlobo zezinye iinkcukacha zeBig Data zineenkcukacha zokufikelela kuma-supercomputers afana ne-D-Wave, apho inyathelo elibhekiselele ekusebenziseni i-quantum computing lenziwe. Ingqiqo yolwazi ngoko ikwazi ukuhlalutya yonke loo datha malunga nayo yonke into kunye nabantu bonke ngexesha langempela. Kwaye oku kudala umfanekiso wento abantu abayenzile ngaphambili kunye nento abakwenzayo ngoku ngeyesibini. Yile ndlela i-AI ihlalutya ngayo ngamnye, kodwa kunye kunye. Sibheke ekusebenzisaneni kwezentlalo kwaye usithiwa igama. Umzekelo, i-AI inokuqikelela ngokuchanekileyo ukuba ngaba abantu baya kwenza ntoni, kodwa kunokukwazi ukuchaza izinto ezibonakalayo. Kwaye kufana nokusebenza kwendalo, umzekelo. I-AI inokuqikelela indlela umhlaba owawufakwe ngayo ebusika uza kubonakala ngathi ehlobo (jonga ividiyo ezantsi kwaye ufunde ngaphantsi kwevidiyo).
Kodwa iyaqhubeka ngakumbi. Ubulumko bobuchule bungabonakalisa abantu abaye bafa ebomini baze bavumele ukuba badlale kwifilimu. Umzekelo omhle ngowomdlali we-actor uPaul Walker wechungechunge lwamafilimu okukhawuleza kunye nolaka. UPawulos Walker wayesele ebulewe engozini yemoto, kodwa edlala indima ehamba phambili kwi-Fast & Furious 8. Ngaba akunjalo? Ngaloo filimu kwakufuneka kusetshenziswe ngokuphindaphindiweyo komzimba kunye nobuso bukaPaul Walker. Okwangoku, i-AI inokuyenza loo nto ngaphandle komzimba kabini. basemoyeni iphuhlise yongeza mhlawumbi ngokukhawuleza kwe uMthetho Moore kaThixo (ngokukhawuleza kunokuba ngokucacileyo) kuba AI uye kuphela kusiba ngokukhawuleza iziqhubekisi ekuchithweni kwayo, kodwa ngakumbi iziqhubekisi ngakumbi ukuba "ubuchopho ezihlangeneyo" yayo (ingqondo hyve) (kwi-network chain block ). Oku kuthetha ukuba ingqiqo yolwazi ingasebenzisa nayo yonke ikhowudi yomthombo we-software yolwazi oluvulekileyo emhlabeni wonke ukufaka isicelo kwakhona. I-AI inokudala iindaba eziyinkimbinkimbi ngakumbi kuneendaba eziqhelekileyo ezinokuyenza (cinga nge-movie 'Wag de Dog'). Jonga ukuba i-software eyiyo ye-CGI esuka kwi-2015 isele ikwazi njani ukwenza abalinganiswa bebhenkco (kubangaphantsi kwevidiyo).
Kuzo zonke iikhamera ezikhoyo ukuba isixeko sonke sigcwele kwaye iikhamera ze-laptop yakho, i-smartphone, i-pad, njl njl. Ulwazi lobutyebi bomntu, ukuziphatha kwalo, iingqondo kunye neempawu zangaphandle zikhula ngeyesibini. IAI ifunda kuzo zonke iividiyo ozibeka kwi-Facebook, Instagram kunye ne-Snapchat kwaye ngoko isofthiwe esuka kwi-2015 (masithi) yinto ebonakalayo kuphela ye-AI.
Uyakhumbula indlela i-Facebook iplagi evela kwiprojekthi yakhe ye-AI kwafuneka ukuba idwebe kuba ii-AI zaqalisa ukuphuhlisa ulwimi lwabo? I-A ikwazi ukufikelela kuye yomnatha woxhumo apho zonke iinkcukacha zobulumko kwihlabathi ziyakwazi ukunxibelelana omnye nomnye. Kwaye i-AI (njenge-robot Sophia) ixhunyiwe kwinethiwekhi ye-blockchain ehlabathini lenene kwaye ingaba nedatha efana no-Palantir. Ngoko ke sikhululwe isampula yokufunda i-AI ngokukhawuleza kwihlabathi ukuba zonke i-software kunye nolwazi lonke liyasondela kwaye ifunde kuyo njengeponji ngokuhamba kwexesha langempela lokumbiwa kwedatha. I-AI enjalo inokukwazi ukwenza ingozi nawe kwikona apho uzibona ubulawa khona. I-AI enjalo inokurekhoda nodliwano-ndlebe nawe kwi-Vondelpark ngelixa ungazikhumbuli ukuba unake uxoxe nomntu. (ngaphantsi kwevidiyo)
I-AI inokubonelela ngeendaba ezisemgangathweni kunye neyona ndlela ephezulu yeendaba ezikhohlisayo kwaye awuyi kuze ukwazi ukuyivula. Umda phakathi kwezinto eziyinyaniso kunye neyona nyaniso iyaphela. I-AI ingabonakalisa ukuhlaselwa kwamaphekula kwaye ibonise ityala legagorha kwaye yenza konke kwiCGI. Awusoze uyifumane. AI uya kuba nako ukulandela psyche adibeneyo of ziingqondi ezakha (ekwabizwa ngokuba nkolelo iyelenqe) nangokuhlaziya kunye ngaxa lithile "iindaba mbumbulu" ukuze bazi ukuba sengqiqweni ukuba nkqu kwama ezininzi kakhulu engqondweni apho. Abo Amandla umzekelo sisuse nombhali nzima yaye AI bavelise movie apho ibhengeza ukuzibulala kwakhe. Yonke lunokwenzeka kwaye akukho nto kubonakala ntoni. Yeka ukujonga iindaba! Yeka ukufunda i-Facebook news feed! Yeka ukondla i-AI!
Uludwe lwekhonkco lovimba: singularnetnet.io
Iiprobhothi ze-Facebook ngokuzenzekelayo: I-AI kunye ne-bioterrorism isongela ebantwini?
tags: ai, eziziimbalasane, ingqiqo, eziqhelekileyo, ukwenza, eendaba, iindaba ezibuxoki
8 Disemba 2017 kwi-11: 43
Ewe! Kwaye kwaye ngoku ungaphumelela kakuhle kwilizwe lakho lephupha:
"Kuthiwani ukuba SIYA kulawula amaphupha akho?"... Ukuqalisa
8 Disemba 2017 kwi-13: 49
Ukuba ukuhlaselwa kukukrokra, kubonakala kum (= kungekhona wonke umntu ??) kucace.
I-1) Ifakwe ngokucacileyo kwikhamera kwelinye icala eliphakamileyo kwi-facade.
Umbhalo ongcolileyo njl kunye nomfanekiso!
(Ngoku iifayile zekhamera zifumaneka ngokukhawuleza).
2) Abaphathi sele bekulungele
I-3) Abaphathi bayesaba u-haha ukuba angenele kwaye ulinde ngokungapheliyo.
(Ukuba oko kwenzeka ngokwenene ngamapolisa aqeqeshiwe kakuhle babeza kungenelela ixesha elide elidlulileyo)
4) Indoda egqoke ngokugqithiseleyo, yaqinisekisa ukuba 'iArafat' ibhekise inqena kwintloko.
I-5) Abagadi bamabango abathi bazama ukuzolalisa indoda kwaye bamnike intonga.
(Man talmt ukuhamba ngokukhawuleza haha)
I-6) Amagumbi kufuneka angenele ngokukhawuleza ukuze enze umonakalo omkhulu emnyango ngaphakathi (iifestile esele ichithwe, oko kufuneka ukuba yanike ingcamango ezindlebeni zala manqabileyo).
7) Qaphela "! Ukuphuculwa kweengqondo kubemi kwakhona kwakhona bell kwicawa e kufuphi. UbuYuda, ukunyaniseka kwePalestina (ukufunda isiko saseArabhu nabantu) kunye nobuKristu kufuneka bathandwe kunye kunye nobuchopho babantu ukwenzela ukuba iinkolo ezahlukeneyo zikwazi / ziya kusekwa. Ngaphantsi kwegama elidala: Uhlula kunye ne Impera! = Uhlula kunye nokulawula.
8) Ekugqibeleni, lugxininise kwimidiya yokukhawuleza kunye ngqo (i-TV & iphephandaba). Ekugqibeleni, isitrato kufuneka sakhiwe xa kushushu, akunjalo!
I-ps Restaurant 'abayisebenzisile' yayingendawo kwaye / okanye umninibo abathe bathenga. ???? ????
8 Disemba 2017 kwi-13: 52
Mxolela iziphene zokuthayipha.
8 Disemba 2017 kwi-15: 08
Kuyinto eyoyikisayo ngakumbi ukuba ukwazi ukubona ngubani oza kudla kule khazaar emva koko. IZiyonism inezopolitiki zaseDatshi kwiinkcukacha zokuthi:
Ukususela kwi-04: 53
8 Disemba 2017 kwi-15: 09
NJENGOBA UKUHLALA KUKHULU, KUNYE IZWI EZIKHULU?
11 Disemba 2017 kwi-12: 35
@ZandInOgen Eneneni into embi kakhulu kunokuba sasicinga.
QAPHELA BENE bahleli apho ukuze bahlalisane namaKristu - babonise kumaYuda aseKharzar !!!
Ngelixa bengaboni nakwi-NIeuwe (iTestamente yaseKhazari).
Ngamanye amaxesha lobuYuda Orthodox (apho) uyazi kuphela iTorah, iincwadi zokuqala 5 zeTestamente eNdala (kodwa okungakuncinananga) iingcinga million ambalwa esigwenxa opgenoteerd kwi ITalmud, kodwa kuyabonakala ukuba loo maKristu stupid ukuze andazi , okanye obawayo igunya sokuzibulala envooral (kodwa noko buya) ukuba 'nabo Baqukene, "esazi ke ukuba fudula babonwe ngabo njengoko kwezizwe (iinkomo / nezizwe) ukuba unako cheat (iTalmud), kwabo abantwana ukudlwengula (iTalmud) kunye Halala nabo wabulala omnye (iTalmud) apho eRashiya emva kokuba 1917 revolution t / m ixesha Stalin ubukhulu becala kwenzeka (iingqikelelo asusela 40 ukuba 60 million baseRashiya wabulala yi "ndawonye".
Bona "iminyaka eyi-200 ihlanganiswa ngu-Alexander Solsjenitsyn,
"Ngaphantsi komqondiso we-scorpion" nguJuri Lina kunye
njengoko ndithethile ngaphambili kwincwadi yeBento Bradberry kunye nezinye iincwadi kunye namaxwebhu
I-Ps "AmaKristu athande njengaye", UPim Fortuyn uza kuthetha.
11 Disemba 2017 kwi-16: 32
Idd isinagoge likaSathana uye waxakeka ukubeka izinto ezininzi kwindawo. Bayazi kakuhle ukuba uthando lwaba bantu luyancipha eYurophu emva kobuxoki babo obukhulu malunga nokuguqulwa kweRussia, holohoax kunye nenene 9 / 11. Kusasahluke kuzo zonke iiflegi zemisebenzi yeeflegi esiye safuneka sizigwinyele ezi nkampu. Bhala ingqalelo kumbuzo we-intatheli kwi-Ten Broeke, ukuba uya kuza kwakhona xa echaphazelekayo ngePalestina (imizuzu yangempela). Ukhangeleka nje ukuba uvele nje emluma kwi-lemon. VVD = VolksVerraders Isizukulwana sesithathu, sise-radar iig.
Ixesha lexesha lovavanyo lwe-psychopaths kunye neemvavanyo zesimiti = FUNDA NOVAVANYO.
I-PS: Ungalibali i-6.660.000 ????
8 Disemba 2017 kwi-15: 41
Ngokuqhelekileyo ubona ngezenzo zobuxoki ukuba ikhamera ngenjongo kuzo zonke iinkalo, ngeli xesha ikhamera yahlala igxininiswe kakuhle, o ewe yinto engahambelaniyo.
Ngoko kukho kwakhona ibekwe kwi umabonwakude izigidi emagumbini cal nederlan ngamacandelo uluvo ubuso ekuthiwa uthembekile s bafana i Kristall Nach !!! ngoku kunokuba njani ixabiso kangakanani ukuba apha kukho isidalwa nje washumayela nendlela ubuqili opruiïend eendaba okanye hayi kwaye apho luxanduva lwabo ababukeli njengoko bezama ukuqonda imbali ukuba consequetie zibe de Kristall Nach (nokuba wahlela yi amaJamani ngokwawo)
Ngaba aba bantu bafanele babe neentloni kakhulu, ngubani owenza isitatimenti aze anike iqonga
Ngezantsi uqikelelo lwefestile yevenkile eye yachithwa (ngesiNgesi)
8 Disemba 2017 kwi-23: 02
@Camera Enyanisekileyo ukukwamkelwa ngenjongo yokwamkelwa kwedayimani ukuthelekisa nobusuku be-crystal.
Oko i-ENGELS kunye nabaphathi babo bamaYuda, amabhanki, njl njalonjalo ukulibala ukutsho kukuba ngomhla we-24 Matshi 1933 imfazwe yavakaliswa eJamani ngeYordan yamazwe kwaye ayikho enye indlela.
ezinye iindawo ezininzi https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip-rHpsvvXAhVOaVAKHf3HApMQtwIIXjAJ&url=https%3A%2F%2
49275330 & usg = AOvVaw0pInWP3wXTm6nqoX-CXFDt njl
funda kwakhona incwadi ethi Benton L. Bradberry: Inkolelo yeJamani yase-German
I-logic kunye namaxwebhu enkulu ucaphulo, yaye abaninzi bathetha 'nemiqulu' abamnyama / fotoos ezimhlophe. Wena umane ebona abantu ubuxoki omkhulu yaye abaninzi malunga zombini kweMfazwe Yehlabathi I and kweMfazwe Yehlabathi II kunye revolution Russian vna 1917. (Le ncwadi ichaza ngokucacileyo isizathu sokuba amaJamani 200 a 300 iwaka washiya babesindile, amajoni yaseBritani 1940 / iinqwelo-moya ukuya eNgilani endaweni ukuba atshabalalise okanye enze ibanjwa !!! I amaJamani akazange eNgilani ukuba ukoyisa kodwa bonke (amashumi) iziphakamiso woxolo zaye Churchill (warmonger yengqondo) ngamasebe angcakacileyo. kanye kutheni ucinga Alfred Speer lathumela emsebenzini wakhe, eNgilani?
Incwadi ekufuneka iguqulelwe ngokukhawuleza kwisiDatshi ize ifunde kuthi kuzo zonke izikolo eziziisekondari. isakhelo!
Kufumaneka nje kwi-bol.com.
12 Disemba 2017 kwi-14: 40
Kwakhona siyazi ukuba akukho vlogger yangasese, iividiyo zenziwe ??
Omnye obonayo, uthanda ukudlula.
8 Disemba 2017 kwi-15: 58
Ukuthetha ngokubukeka kombuso, iingxaki ngeprogram? ????
UDonald Trump uyakhulisa intetho ngexesha lokumemezela kweYerusalem, kuphazamise ukucamngca kwempilo
Utshintsho kwi-albhamu lubonakala luchaphazela izandi zikaYe 'kunye' th '
Kwaye siyazi ukuba ngubani ophethe i-Hollywood:
9 Disemba 2017 kwi-21: 25
'Oo, yintoni i-web-tangled (ehlabathini lonke) esiyilulayo ... xa kuqala senza ukukhohlisa.'
9 Disemba 2017 kwi-21: 27
10 Disemba 2017 kwi-16: 46
10 Disemba 2017 kwi-17: 44
Ukucinga ukuba thina njengabantu singakwazi ukuphikisana ne-AI emva kokuba kuphunyezwe ukusabalalisa. I-US iye yazinikezela ngokupheleleyo ixwebhu, yonke into esiyibonayo kummandla woluntu ngokwe-ICT ivela kwi-DARPA. Isicwangciso sesikhathi eside, umzekelo:
Umncedisi oMntu oMntu oDalayo we-DARPA (Learns (PAL) Programme Yakha iTeknoloji yokuba iPapu
. DARPA ikhuthaze kakhulu
Ukuthengiswa kwe-PAL kunye ne-2007, ekuphenduleni kwesikhuthazo se-DARPA, uSiri (Iris) Inc. wadalwa
ukuthengisa iteknoloji ye-PAL kwinkqubo enokukunceda umsebenzisi ngokulawula ulwazi kunye
ngokuzenzekelayo nge-interface-based interface. Ngo-Ephreli 2010, Siri Inc. yafunyanwa yi-Apple, yintoni
phuhlise phambili iteknoloji ukuba ibe yingxenye ebalulekileyo yenkcazelo-ye-Apple
Inkqubo yokusebenza yeselula ekhoyo kwi-iPhone ne-iPad.
http://archive.darpa.mil/CyberGrandChallenge_CompetitorSite/ (I-DARPA ngokukhawuleza ngokukhuseleka kwekhompyutheni yomngeni = Inkqubo yokuzikhusela i-AI kwisenzo)
10 Disemba 2017 kwi-18: 46
I-DARPA phambi kwe-Facebook ibonisa ukuba yiyiphi inxaxheba ye-AI eya kudlala ngokukhawuleza kwidomeyini kawonkewonke. Sinikezela ngegalelo ... abo bawusebenzisa
Ngaba Iimpapasho zeTwitter ezijoliswe kwiintshazana ezibuhlungu?
Intanethi yentlalo ibonakala ikhangele abantu abavelele abaxhalabileyo nabangenanto.
https://techcrunch.com/2017/10/17/facebooks-consumer-hardware-chief-regina-dugan-is-leaving-the-company/ (i-mission iphumelele)
Utshi uDugan uthetha kwaye uhlawula ngokukhethekileyo ukubonakaliswa kwemimoya ngasemva:
10 Disemba 2017 kwi-18: 59
I-Facebook F8 = Ukulwa, ukulwa nobani?
13 Disemba 2017 kwi-01: 14
Abafake baye baqhathanisa noDe Kristallnach, ngaba kunokuba kungenangqondo nakakhulu?
« Ngoku ukuba siyazi ukuba yintoni ingxaki, yintoni isisombululo?
Indlela i-bitcoin kunye nabanye baza kudibaniswa ngayo ne-IMF yamalungelo okuDrafka okhethekileyo (SDR) nge-ACChain »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.384.415